Midawga Afrika oo berrito oo khamiis ah shir ku yeelanaya Addis-ababa, kana hadli doona abaaraha Geeska Afrika. – Radio Daljir
Addis-ababa, Aug 24 – Shir uu yeelanayo ururka midawga Afrika ayaa maalinta berri ah lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Addis-ababa ee dalka Ethiopia, kaasoo looga hadli doono arrimaha abaaraha Geeska Afrika.
Shirkaan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa ka qaybgalaya inta badan madaxda waddamada ku jira ururka midawga Afrika iyadoo qorshaha isku-imaatin ee ugu weyni uu yahay sidii hadaf midaysan looga qaadan lahaa qorshaha gurmad ee abaaraha inta badan ku habsaday waddamada Geeska Afrika oo Soomaaliyana ay ku jirto.
Madaxda Afrikaanka ah ee shirkaasi imaanaya ayaa lagu wadaa in ay halkaasi ka sameeyaan yabooh-dhaqaale aruurin ah oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha daba-dheeraaday ee Geeska Afrika, waxaana si gaar ah loo eegi doonaa Soomaaliya oo muddo dheer dawlad la’aan ahayd, xoogga abaartuna saamaysay.
Qaar ka mid ah waddamada shirkaasi berri ka qaybgalayaa ayaa horay u sameeyey yabooh-dhaqaale oo ku aaddana abaarta Soomaaliya, gaar ahaana waddanka Aljeeriya oo ku dhawaaqay maalaayiin dollar.